Ny kalandrie momba ny zazavavy
Maro ny mpivady te-hiteraka zazavavy. Mba hanaovana izany, dia manandramany karazana tricks isan-karazany izy ireo: ampiasao ny kalandrie momba ny zazavavy, ny fomba fiasa ara-batana, sns. Na izany aza, tsy dia mahomby avokoa izy rehetra. Nandritra ny taona maro dia maro ny fomba fanomanana ny firaisana amin'ny zazakely ho avy. Diniho ny fomba malaza indrindra amin'ny fitadiavana zazavavy.
Inona no ilainao hahafantarana ny zazavavy iray "ara-tsiansa"?
Alohan'ny hanombohana ny fiheveran'ny ankizivavy iray dia mila mahafantatra ireo toetra ara-batana manaraka ireto ianao. Ny firaisana amin'ny zazakely ho avy dia miankina amin'ny lehilahy. Avy amin'ny spermatozoon ilay atody vavy dia mahazo ny chromosome X faharoa izay mamaritra ny firaisana ara-nofo. Amin'ny ankapobeny, ny spermatozoa spermatozoa dia kely noho ireo izay manana Y-chromosome. Ankoatra izany, ny hafainganan'ireo mitondra ny X chromosome ambany, nefa velona ela kokoa izy ireo. Noho izany, ny hitady zazavavy iray dia ilaina ny miara-mikaroka ny atody X, izay omen'ity fomba manaraka ity:
mihena ny habetsaky ny ejaculate;
ny fananganana tontolo iainana ao amin'ny vagina.
Ilaina ihany koa ny fanaovana firaisana ara-nofo amin'ny andro vitsivitsy alohan'ny fanombohan'ny ovulation. Amin'ity tranga ity dia ho faty ny spermatozoa miaraka amin'ny Y-chromosome mandritra ity fotoana ity, ary amin'ny X - dia handray anjara amin'ny fampiroboroboana.
Ahoana ny fomba hitadiavana ankizivavy mampiasa ny kalandrie?
Misy karazany maromaro amin'ireo kalandrie momba ny fampakaram-bady, izay ampiasainao hanantena ny fisehon'ny ankizivavy iray. Ny kalandrie mahazatra indrindra hatramin'izao dia Japoney sy Shinoa.
Rehefa mampiasa ny fomba ampiasain'ny Sinoa dia ampiasaina ny latabatra manokana izay manamarina ny daty nahaterahan'ny reny ho avy.
Amin'ny fampiasana ny fomba fanao japoney dia ampiasaina ny fitsingerenan'ny andro nahaterahana, na ho an'ny reny na ny rain'ny zaza. Ny fahasamihafana amin'ny Sinoa dia ny fametrahana ny laharam-pianakaviana voalohany, izay ampiasaina amin'ny fananganana ny firaisana amin'ny latabatra faharoa.
Ny fampiasana karazana kalandrie vavy ho an'ny zazavavy dia fomba tsy mahomby. Na izany aza, indraindray ny vehivavy dia namaly tamim-pahombiazana ireo fomba fitsaboana ny zazakely.
Ahoana no fiantraikany eo amin'ny lahy sy ny vavy?
Nandritra ny taona maro nanamarihana dia hita fa ny fihinanana vehivavy iray koa dia misy fiantraikany amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny hoavy. Noho izany, ny sakafo manokana natokana ho an'ny zazavavy iray dia natambatra.
Noho izany, tokony ho 3 volana mialoha ny fanolorana azy, dia ilaina ny mampihena ny habetsaky ny siramamy voavoly, ary koa ny sira. Ny vokatra dia tokony ahitana magnesium sy calcium bebe kokoa. Ho an'ity tanjona ity, ireto vokatra manaraka ireto dia soso-kevitra hampiasaina:
seafood (crab, shrimp, trondro voina);
mandarin, apples, oranges, birinina, voaloboka mena;
voankazo (vary, manta);
voanjo (voanjo, menaka, alamaina).
Miaraka amin'ny fampiasana ireo vokatra ireo, dia mitombo ny fahatsapana ny fiheveran'ny zazavavy iray.
Ahoana ny fiantraikan'izany eo amin'ny lahy sy ny vavy mandritra ny firaisana?
Misy ny fiheverana fa ny fiheveran'ny vatana mandritra ny firaisana dia misy fiantraikany amin'ny firaisana ara-nofo amin'ny zazakely amin'ny ho avy koa, ary misy aza ny fisian'ity ankizivavy ity. Ny tanjona lehibe amin'ity dingana ity dia ny mametraka ny lalan'ny spermatozoon amin'ny atody farafahakeliny araka izay tratra, izay mametraka ny "misionera", mandry eo anilany ary ny "vehivavy eo amin'ny vavony", mifanentana tsara.
Fomba hafa hitadiavana zazavavy iray
Mba hametrahana andro tsara ho an'ny ankizivavy iray dia azo ampiasaina ihany koa ilay antsoina hoe meta-lozam-pahefana. Araka ny filazany, ny vehivavy rehetra dia samy manana ny tsiranon'izy tsirairay, manoloana ny fahaterahana. Izy io dia omena amin'ny fotoana hahaterahana ary tsy miovaova mandritra ny fiainana. Mandritra izany fotoana izany, ny mety hitera-draharaha dia mitombo ao anatin'io fotoan'ny volana io, rehefa teraka ny reny.
Noho izany, misy fomba maro, aorian'ny fianarana, ny vehivavy dia hahafantatra ny fomba hanisana ny fiheveran'ny ankizivavy iray. Saingy, tsy misy amin'izy ireo mamela anao hanao izany, miaraka amin'ny fahafaha-manao 100% amin'ny famolavolana ny fiheveran'ny zazavavy, toy ny hoe tsy tadiavina.
Nahoana no tsy manome zanaka ny ankizy?
Firy ny atody ny vehivavy?
Borovaja uterus - fampiharana amin'ny tsy fahamendrehana
Fandinihan-tena ho an'ny ovulation
Sakafo amin'ny plough
Tantely voatokana miaraka amin'ny tsaramaso koba
Ahoana no fomba fitsaboana ny aretim-pivalanana amin'ny kisoa?
Fitaovana - raharaha
Ny mpilalao Kirk Douglas dia nanao fanomezana be dia be